Alshabaab oo bilaabay Hab Cusub ay Qaraxyada Kusoo galiyaan Muqdisho - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
Alshabaab oo bilaabay Hab Cusub ay Qaraxyada Kusoo galiyaan Muqdisho
Sep 16, 2019 - Comments off
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa billaabay qorshe cusub oo ay qaraxyada ku soo geliyaan magaalada Muqdisho, tan iyo markii la xiray wadooyinka magaalada.
Qaar kamid ah saraakiisha amaanka Soomaaliya ayaa Allbanaadirmedia u sheegay in ay ogaadeen in Al-Shabaab gaadiidka Bajaajta ku soo raraan Qaraxyo, iyagoo ka soo gelinaya dhowr wado oo ku taala magaalada Muqdisho, kadibna waxay ku keydiyaan guryo iyo xarumo ay ku leeyihiin magaalada gudaheeda, iyagoo ugu dambeyntii raba in ay ku raraan gaadiid kale.
Qofka aan la hadalnay oo ka tirsan sarakiisha ugu saraysa ee dhanka amaanka ayaa sheegay in mootadii ku qarxaysay Towfiiq ay aheyd mid qaraxyada iyo dareeskaba u soo waday xaafadaha gudaha ah ee magaalada Muqdisho, si loogu weeraro xarumaha dowladda.
“Markii ay qaraxyada usoo rarayaan xaafaha xiran ee gudaha magaalada, Bajaaj ayaa lagu soo qaadaa maxaa yeelay bajaajtu lama baaro, waana qaraxyo diyaarsan si hadii ay gali waayeen isu qarxiyo qofka” ayuu yiri sarkaalkaan la hadlay Allbanaadirmedia oo codsaday inaan la magacaabin.
Tan iyo markii la xiray waddooyinka Muqdisho waxaa aad u yaraaday qaraxyadii waa weynaa ee magaalada ka dhici jiray, waxaana Shabaabka ay kusoo koobmeen qaraxyo yaryar. Mooto bajaajta ayaan magaalada lagu soo gelin karin qaraxyada waa weyn.